Fikarakarana sy fanomanana: mbola tsy ampy vola, saingy miroso ny fifidianana | NewsMada
Fikarakarana sy fanomanana: mbola tsy ampy vola, saingy miroso ny fifidianana
“Mbola misy tsy ampy kely ny toe-bolan’ny Sacem. Manodidina ny iray tapitrisa dolara no mbola tsy ampy amin’ny volan’ny Sacem amin’izao“, hoy ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Nanisana, omaly, momba ny toe-bola hanatanterahana fifidianana.
Na izany aza, mandroso hatrany fa tsy misy sakana ny fikarakarana ny fifidianana. Izay vola misy ao amin’ny Sacem miaraka amin’ny volam-panjakana no ampiasaina amin’ny fifidianana. Ny biletà tokana sy ny antontan-taratasim-pifidianana no tena lehibe amin’ny fandanianana amin’izao. “Tsy manana olana isika amin’ny fanatanterahana ny fifidianana fihodinana voalohany, fa mandeha izany. Ho hitantsika eo ny amin’ny fanatanterahana ny fifidianana fihodinana faharoa”, hoy izy.
Mangarahara ny fitantanam-bola
Mangarahara ny fitantanam-bola, araka ny nambarany. Tsy misy olana raha ny kaonty avy amin’ny Ceni satria atolotra ny fitsarana misahana ny kaontim-bola izany ary miantoka ny fangaraharana. Misy fanaraha-maso mifanaraka amin’ny fomba fitantanam-bola ny famoahana ny kaonty eo anivon’ny Ceni.
Nisy ny vola 150 000 dolara avy amin’ny fanjakana anglisy, manampy ireo vola nalefan’ny iraisam-pirenena hamatsiana ny Sacem.